Madaxweyne Deni oo ku amray Maamulka Gobalka Bari inay si Deg deg ah u xaliyaan cabashada shacabka. - Awdinle Online
Madaxweyne Deni oo ku amray Maamulka Gobalka Bari inay si Deg deg ah u xaliyaan cabashada shacabka.
Madaxweynaha dowlad Goboleedka Puntland Saciid Cabdullaahi Deni ayaa Maamulka Gobolka Bari iyo kan degmada Boosaaso kala hadlay Cabasho kasoo yeertay shacabka ku dhaqan halkaas.
Madaxweyne Deni ayaa qadka telefoonka kula hadlay Maamulka Gobolka Bari iyo kan degmada Boosaaso, isagoo ku amray inay si Deg deg ah loo xaliyo cabashada shacabka oo ku aaan qaabkii loo qeybiyay xaafaddaha Magaaladaas.
Intaas kadib Maamulka Gobolka Bari iyo kan Boosaaso ayaa kulan Deg deg ah ka yeeshay cabashada shacabka, iyagoo ka hadlay sidii loo xalin lahaa arrinta taagan oo sababtay in shalay Banaanbax xoogan uu ka dhacdo Boosaaso.
Gudoomiyaha Gobalka Barri Cabdisamad Yuusuf Maxamed Abwaan oo la hadlay warbaahinta ayaa waxaa uu sheegay dadka ay aad ugu kala aragti duwanaadeen 4-ta xaafadood ee loo qeybiyay Boosaaso, isla markaana muhiim ay tahay in xal laga gaaro arrintaas.
Sidoo kale Guddoomiye Abwaanka ayaa waxaa uu tilmaamay in dib looga laabtay Go’aankii Afarta xaafadood loogu qeybiyey Magaalada, iyadoo haatan la qorsheeyay in la dhigo 5 xaafadood.
Madaxweyne Saciid Cabdullaahi Deni ayaa sheegay in Maamulkiisa ka go`an tahay sidii tabashada loo xalin lahaa, isagoo u sheegay mas’uuliyiinta Gobalka, Wasaaradda arrimaha gudaha iyo Duqa Boosaaso in ay waajib tahay in la ilaasho midnimada bulshada.
Previous articleGolaha Shacabka oo Mooshin u gudbiyay Gudoomiyaha Golaha
Next articleMadaxweynaha PUNTLAND OO DIGNIIN U DIREY SOMALILAND